(MK-677 Powder) Ibutamoren Powder Usage Tips | Ita sarms powder
Posted on 01 / 05 / 2018 by 阿斯劳 akanyora Ibutamoren, MK-677.
(MK-677 Powder) Ibutamoren Poda Powder Usage Tips
1.Chii (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder? 2. (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder Mazano Okutanga
3 (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder Side Effects 4.Wikusarudza MK-677 powder?
5..Nzira Yokushandisa Ibutamoren 6.Ndinofanira Kutora Chii?
7.Ziko rakakurudzirwa kuti Bodybuilders? 8.MK-677 Powder Details:
9.Iiyo Kutora Liquid MK-677 yePair Powder? 10.Tenga Genius MK-677 Powder kubva kuAASraw
(MK-677 Powder) Ibutamoren Powder mushonga unogona kuvandudza hurefu, kuwanda kwemapfupa, kugona kugona kuziva, simba, uye metabolism. Iri kuongororwa chirwere cheAlzheimer, kushaya simba kune vakwegura, uye kushomeka kwekukura kwehomoni.
MK-677 inoshandiswawo nevatambi kuti vawane makwikwi emakwikwi mumitambo. MK-677 inosunga kune ghrelin receptor, kufanana nemigumisiro ye ghrelin. Izvi zvinosanganisira kuwedzera kudya, kufema kwemaviri, mapfupa emaminetsi emagetsi, angiogenesis, kutaura kweVEGF, kudzivirirwa kwemoyo, uye kuenzanisa kweglucose uye energy homeostasis.
Ibutamoren inowanzokurukurwa paIndaneti maforums for its anabolic musungo-kuvaka zvinhu. Inowanikwa pamusoro pekambani uye inoshandiswa neavo vanoda kuwedzera kukura kwavo hormone mazinga.
Zvisinei, zvidzidzo zvechiremba zvechikamu ichi zvishoma. Mutsamba iri pasi apa, tichasimbisa izvo zvinozivikanwa nezvebutamoren kusvika ikozvino.
Ibutamoren (inozivikanwawo seibutamoren mesylate kana MK-677), inokurudzira kuchengetedzwa kwehomoni inokura (GH) uye inowedzera insulini-yakafanana nekukura 1 (IGF-1).
Ibutamoren inowedzera kukura kwehomoni, nekuenzanisa chiito chehomoni ghrelin, uye kusunga kune imwe ghrelin receptors (GHSR) muuropi. Yakagadzirirwa GHSR inokurudzira kukura kwehomoni kubva muuropi.
GHSR inowanika muuropi nzvimbo dzinochengetedza kudya, kufara, mafungiro, maitiro, zviyeuchidzo, uye cognition. Saka, tinogona kutarisira kuti ibutamoren inogona kuchinjawo mabasa aya. Zvisinei, kusvika ikozvino, zvidzidzo zvekuchirapa zvinotsanangura chete migumisiro ibutamoren ine chido - uye sezvinotarisirwa, kufanana neghrelin, ibutamoren inowedzera iyo.
Chinhu chikuru pamusoro pebutamoren ndechekuti inowedzera kukura kwehomhoni yehomoni nechinguva chiduku kana kuwedzera kune mamwe mahomoni, akadai se cortisol. Cortisol inoderedza hutachiona hwehutachiona, inoderedza kuporesa maronda, uye inokanganisa kudzidza nekuyeuka, uye kazhinji hazvina kunaka kuti iyi hormone iwedzere.
2. (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder Mazano Okutanga
Utano hunobatsira hweMK-677 hunotarisa. Kukura kwehommone kunopera nekukwegura, uye MK-677 yakaratidza mumatambudziko asingagadziriswi, e-placebo-akadzorwa kuti achinje kuderera uku kwe1.
Iyi ndiyo nzira yekare yekutsvakurudza kwenguva refu. Ratidza kuti ma hormones, neurotransmitters kana zvimwe zviratidzo zvinopera nekukwegura. Zvadaro, onai kana kudzorera maitiro kunoderedzawo migumisiro yekwegura.
Ini ndakatanga kufarira MK-677 nokuti ndakanga ndichitsvaga hukama pakati pehope nekukura kwehomoni.
Ndisati ndataura nezve mabhenefiti, mhedzisiro, uye kuyerwa kwe (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder, ngatidzokerei uye titaure nezvekukura kwehormone pachayo.
1) Ibutamoren Inobatsira Kuvaka Musumbu
Ibutamoren inowanzoshandiswa sechinhu chinonzi anabolic, kuwedzera hutema hutumbi hwemuviri, kureva kuumba miviri yakakura. Inenge yakashanda mumuromo uye inogona kutorwa kamwe pazuva. Izvo zvose zvikomborero zvichienzaniswa nezvimwe kukura hormone stimulators.
Sezvambotaurwa, ibutamoren inowedzera kukura kwehomoni uye IGF-1. Zvose kukura hormone uye IGF-1, uyewo, inowedzera misi miviri, simba remuviri, uye kuderedza mafuta emuviri.
Muvarume vane utano hwakanaka, mwedzi miviri kurapwa neibutamoren yakawedzera kuonda kwemaoko, uye kwenguva pfupi yakawedzera bhaari yemagetsi (BMR).
2) Ibutamoren Inoderedza Misi Yakashata
Muvashandi vanorarama vane hutano husina hanya, ibutamoren inodzokorora kudya-induced protein kuparara, iyo inogona kukonzera musikana kuparara.
Muvatana vakwegura vane kuputika kwechiuno, ibutamoren yakavandudzwa gait kasi, simba remasimba uye kuderedza nhamba yekuwa.
3) Ibutamoren Inowedzera Bone Density
Kukura kwehomoni (GH) kunowedzera kutapudza kwemapfupa uye pakupedzisira mafupa mashoma Nekudaro, nekuda kwekuwedzera kwekudzoka muzvidzidzo zvakarapwa nekukura kwehomoni, huwandu hwemapfupa hunogona kutanga hwaderera husati hwawedzera. Chaizvoizvo, zvinotora nguva (> 1 gore) kuona kuwanda kwemapfupa kuchiwedzera.
Mune vashandi vakazvipira vane hutano hwakanaka, ibutamoren yakawedzerwa pfupa rekutsvaga.
Kuvanhu vakwegura, ibutamoren yakawedzera chivako chefupa, zvichienzaniswa newasteocalcin, chiratidzo chefupa rekutsvaga.
Muchikadzi-menopausal vakadzi, ibutamoren yakawedzera masimbi emaminera emagetsi, ayo anobatsira kuwedzera simba refu uye kudzivirira osteoporosis.
4) Ibutamoren Inovandudza Kurara
Chimwe chidzidzo chakaratidza kuti mune zvidzidzo zviduku nevakwegura, ibutamoren yakagadzirisa hutano hwekurara uye REM (kufamba kweziso nekukurumidza) kurara kwenguva.
Kunze kwezvidzidzo zvezvesayenzi, kwakave nemishumo yakawanda yehutsika hunovandudzika muhutano hwekurara, pamusana pezvikwata zvakasiyana-siyana zveIndaneti.
5) Ibutamoren Kurwisana Nokukwegura uye May Kuwedzera Kuwedzerwa
Growth Hormone (GH) kuchengetedza uye musimba mashoma ose anononoka kubva pakati pepakati pemakore ekuberekwa muupenyu hwose.
Mune chidzidzo kune vakwegura, zuva nezuva ibutamoren yakawedzera GH uye IGF-1 mazinga kune avo vane vechidiki vane utano vasina zvirwere zvakakomba. IGF-1 inozivikanwa kuva nemigumisiro inobatsira pakugara kwenguva refu.
Mune imwe dzidzo, ibutamoren akadzokorora huwandu hweHymmone profile mune zvinyorwa zvakanyanya.
6) Ibutamoren Chivabvu Have Nootropic migumisiro
Vamwe vanhu vanoshandisa ibutamoren seanotropic nokuti inoshanda pane ghrelin receptor, iyo ine nootropic yakaipa. Iwe unogona kuverenga zvakawanda pamusoro pemigumisiro iyi mubasa pa ghrelin. Sayenzi, zvisinei, zvakadaro, kuti idzidze kana uye sei ibutamoren inobata sei kugadzirisa kushanda.
Nzira mbiri dzisinganzwisisiki iyo ibutamoren inogona kuwedzera huropi hunoita basa:
Ibutamoren inowedzera IGF-1, inozivikanwa kuti inovandudza chiyeuchidzo nekudzidza.
Ibutamoren inowedzerawo REM nguva yekurara uye kurara kwehutano. Uye tinoziva kuti kurara kunokosha kuti uve neruzivo rwekushanda.
Chidzidzo chaibvunzurudza kushamwaridzana kweGFI-1 neAlzheimer's disease, uye ingave ibutamoren inogona kubatsira. Zvisinei, munyaya ino, ibutamoren yakanga isingabatsiri pakudzikisa kuwedzera kweAlzheimer muvanhu.
7) Ibutamoren Inobatsira Mukurapa Kukura Kukanganiswa kweHormone
Ibutamoren inogona kuwedzera kukura kwehomoni, IGF-1, uye IGFBP-3 mazinga muvana vane kukura kwehomoni. Uyezve, izvi zvinogadziriswa zvinogadziriswa pasina kushandura kuwedzera kweprolactin, glucose, triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), thyrotropin, cortisol kana insulin.
Muchiremera GH-yakashaya varume, ibutamoren yakawedzera IGF-1 uye kukura kwehomoni, isina kuchinja kukuru mu cortisol, PRL, uye mahomoni ehomoni. Zvisinei, insulin uye glucose yakawedzerwa.
8) Ibutamoren May Kubatsira neAlonda Healing uye Kuvandudzwa kweTisue
Kukura kwehomoni kunowedzera kuchinja patsva uye kukuvadza kurapa, saka ibutamoren inogona kubatsira neizvi.
Iko kune mimwe mishumo yebutamoren inobatsira, asi zvidzidzo zvezesayenzi zvinoshaikwa.
9) Ibutamoren May Kubatsira neHangovers
Uyu unecdotal, asi vanhu vanorayira kuporesa hangovers ne ibutamoren.
3 (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder Side Effects
Iyo inowanzova nemigumisiro yebutamoren inowedzera mukuda kwechinguva uye kwenguva duku, munyoro wakaderera kumucheto edema nemarwadzo emisumbu (R).
Tsvakurudzo dzinoverengeka dzinorondedzera kuwedzera mukutsanya kweglucose yeropa uye kuderera kwe insulin senitivity (R, R).
Iyi migumisiro yakafanana yakafanana neyo inowanikwa kuvanhu vane huwandu hwekukura kwehomoni, zvikurukuru marwadzo akabatana uye insulin kushivirira (R, R).
Kunyange zvazvo nyanzvi dzakawanda dzichiratidza zvishomanana kana kuti hazvina matambudziko, imwe dzidzo yakagumiswa nekuda kwezviitiko zvakakomba zviitiko. Muvatana vakwegura vane kuputika kwechiuno, ibutamoren yakakwiridza kuwedzera kweropa, glucose yeropa uye HbA1c, uye paiva nezviitiko zvekushungurudzika kwepfungwa kwemoyo (R). Varwere vanokonzera kusununguka kwemoyo kwemoyo kwakapfuura 80 uye vane nhoroondo yekutanga kukanganisa mwoyo.
Zvinenge zvakangwarira kutarisa karubhadhirodhi yako kudya uye kugara uchiongorora shuga yeropa uye insulin paunotora ibutamoren.
Sezvo anabolic, ibutamoren inofanira kudziviswa kana une kenza. Zvose kukura hormone uye IGF-1 inogona kukurudzira kenza kukura.
Ibutamoren Powder aka MK-677 Poda yakatengeswa pamusoro pekambani sechigadzirwa chemuviri, kana sekemikemikari yekutsvakira nguva kwenguva yakareba ikozvino. SARM Ndicho chinhu chitsva chikuru zvokuti Mk-677 yakatengeswa saizvozvowo, zvisinei nokuti haisi iyo SARM. SARMS inosarudza androgen receptor modulators, iyo kuburikidza nechiito ivo vanoita nenzira imwechete steroid do; SARM chete ndiyo inosarudza uye inongorongedza chete uyeroro androgen receptors. Chinhu chakanaka pamusoro peSARM ndezvakaita kutora steroid ine unyoro pasina kuwana mavhiringa (pakarepo chero zvakadaro). Izvo zvinogona kuitika migumisiro yeSARM hazvizivikanwe, kunyange zvazvo zvingave zvisina kukuvadza uye pakupedzisira zvinotsiva steroid pamwe chete. Izvo zvinotaurwa, (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder haitauri chero mutezo we androgen mumuviri womunhu, uye naizvozvo haisi SARM. Zviri nyore, zviri nani kupfuura a SARM, uye iri mukirasi yakakwana ndeyoyo.
MK-677 inoitwa nemuromo, bio-inowanikwa mukomboni iyo ine mhedzisiro iyo yaive pakutanga kunyangwe yainge isingazoparadzanisike zvachose kubva paKurera Hormone Kuburitsa Peptide (GHRP-6). Izvi zvinonyanya kuzivikanwa se ghrelin… iyo nzara mahormone? Matanho eGhrelin anosvetuka vasati vadya, uye mhedzisiro yeghrelin neMK-677 zvinoitika kuti unzwe uine nzara zvishoma. Uku kutaura zvisirizvo zvakadaro, uye kwavo kuita kunanga munzvimbo dzakawanda dzehuropi dzakakosha mukuita metabolic. Nekudaro, se ghrelin agonist (kana GHRP-6), MK-677 inogonesa zvinogashira zvinogadzirira muviri kuti upe kudya, kukura, kugadzirisa, uye kushanda. Zvakare nekukonzera kuwedzera kukuru mukukura kwemahomoni mahormone.
Kukurira hormone ndiyo tsime chaiyo yenyika yehuduku. Zvinokusimbisa, kuonda, kuporesa, kunovandudza ganda nemvere, uye zvichida kunyange kuchenjera. Kunyange zvazvo, kukura kwehomoni hauna kuongororwa semunhu anonzwisisa pakukura kwevanhu vakwegura, inowanzokwirira mumakore ehupenyu nehukuru hwakanyanya hwekugutsikana kwepfungwa; kunyanya kukosha kwave kuwanika kuvandudza cognition kune avo vane chirwere cheAlzheimer's. Kuwedzera hormone hapana mubvunzo kuti iri hormone yakakura mukukura kwedu mumuviri, kupa chiratidzo kuti misimba yedu ikure uye iwedzere; kusika mamwe masero masero kukura nekusimbisa.
Kukura kwemhasuru uye kurasikirwa kwemafuta ndicho chinangwa chikuru chevazhinji vevanhu vanofarira MK-677. Ganda rakanaka nebvudzi hazvinyanye kukuvadza kana, asi chokwadi chaicho apa ndechekuti MK-677 isimba rekukura kwehormone inoburitsa komputa. Iine 24 awa hafu-yeupenyu, ichiita kuti ishande kwenguva yakareba, uye kusiyana neruzhinji rwekukura kwehormone inoburitsa makemikari MK-677 haina kuwedzera mazinga ecortisol.
Ibutamoren imwe yeSARMS ine simba uye inobatsira pamusika. Kune avo vasingazivikanwi neshoko, maSARM anosarudza androgen receptor modulators. Iyi mishonga inokwanisa kukanganisa chete ne-androgen receptors mumusumbu. Izvi zvinoita kuti zvibatsire zvikuru uye dzimwe nguva zvive nani kudarika steroid, nokuti steroid inobatana ne androgen receptors mumapfupa, ganda uye nhengo dzomukati. Izvi zvinogona kuguma nemigumisiro yakasiyana-siyana, asi maSARM anogona kushandiswa pasina kuve nemimwe migumisiro. Kusarudzwa uku kunoita kuti vanabolic yavo ive androgenic chienzanisi chinenge 10: 1, asi chiyero chetendi inokonzerwa ne testosterone i1: 1. Nemhaka yeiyo maSARM anokwanisa kubudisa maitiro akanaka aribobolic kunze kwea androgenic nemigumisiro yakadai segynecomastia, bloating, high blood pressure etc.
Vanhu vanogumburwa paSARM, kufanana Ostarine, LGD 4033 kana Ligandrol, kana YK11, kazhinji havana chokwadi, nekuti zvinoita sezvakanaka kuva chokwadi. Zvakanaka, zviri nyore kuyedza uye kuzvionera wega, kana kutarisa maforamu ane zvipupuriro zvisingaverengeki achibvuma kushanda kwavo Izvo chete zvinokanganisa ndezvekuti maSARM haana simba senge anowanzoitwa anabolic steroid. Kana iwe uri kutsvaga kuve monster monster, saka nezvose nzira tora iyo yakasimba kwazvo steroid senge Anadrol 50, Dianabol, Deca Durabolin, Trenbolone, nezvimwewo. Izvi zvinokutora kuti uve mukoko wevanhu. Asi maSAR ndiwo sarudzo yakanakisisa kune avo vanotarisa kuwana hupamhi hwepamusoro, hutsika hunyoro huzhinji nenzira yakasikwa. Mumwe anokwanisa kutarisira kuwana 10-15 mapaundi emisungo yakaonda mukati mechinhu chimwe chete (kazhinji mavhiki 4-5). Usingarevi maitiro anobvisa, ayo ari mune zvimwe zviitiko kunyanya kufadza.
Ichi chaingova sumo shomanana kuitira kuti iwe unzwisise mune imwe nhengo Ibutamoren ndeye. Asi chimiro ichi chaicho chinokosha uye chinomira kubva mumararamiro eSARM nenzira inofadza zvikuru.
5.How Kushandisa Ibutamoren
Kushandisa MK-677 iri nyore kwazvo uye yakapusa, nekuti iri yemuromo yekuwedzera uye hapana chero akaomarara maprotocol akabatanidzwa. Inogona kutorwa kwenguva yakareba, kusvika kumavhiki gumi. A mwero zuva nezuva dose ndeye 10 mg. Vamwe vane ruzivo rwekusimudza vanoshandisa doses ye25 mg uye yakakwira. Izvi zvakadaro, hazvidiwe kana iwe uri kushandisa iyo yekuwedzera kwenguva yekutanga. Kugadzirisa iyo dosi panguva yekutenderera inobvumidzwawo. Kana iwe uchinzwa kuti muyero urikutora parizvino hauna kusimba zvakakwana kuti ubudise mhedzisiro iwe yaunotarisira, unogona kuiwedzera zvishoma uye uone kana iine simba rakasimba. Uye zvinopesana, pamwe iwe unogona kuwana iwo iwo mhedzisiro nekutora yakaderera dosi. Wese munhu akasiyana, asi muyero wakajairika we50 mg zuva nezuva unoita basa rakanaka nevazhinji vashandisi.
Kana iwe wakatarisa-svetuka kumativi ekuvaka muviri, uchaona kuti vanhu vazhinji vakabudirira nekubatanidza Ibutamoren, Candarine uye Andarine. Iyo yakashandiswa pamwe chete, zvigadzirwa izvi zvinoumba kukuru kukata stack. Simba rekucheka rine simba rezvikamu zvitatu zvinowedzera pamwe chete raizoguma mavhiki e10. Iwe unoda kutora zuva nezuva 25 mg ye Ibutamoren, 20 mg Cardarine uye 25 mg weAndarine. Uyu ndiwo mutambo wevashandisi vepamusoro, asi zvakakwana kuti zvive nemakwikwi akakodzera muzinga wemamiriro ezvinhu, vascularity uye kuonda.
6.Ndinofanira Kutora Chii?
Mhinduro yeMK-677 Dosage: 25 mgs-50 mgs
Mamwe-MK-677 yekuongorora inoratidza kuti MK-677 dhiyo inonzi 25 mgs-50 mgs kana iri muromo.
Kutungamira kweMK-677 25 mg kwakakonzera kuwedzera kwe60.1% mumaseru eSGF-1 pamasvondo matanhatu uye 6% kuwedzera pamwedzi gumi nemaviri. Mune yakasanganiswa-mhedzisiro mamodheru aisanganisira kurapwa, nguva (mwedzi), randomization strata (yekutanga basement MMSE mamakisi ≤72.9 vs> 12), uye kudyidzana kwekurapwa-ne-nguva, pakanga pasina misiyano yakakura pakati pemapoka ekurapa paCIBIC-plus kana shanduko inorehwa kubva pazvikamu zvekutanga pane iyo ADAS-Cog, ADCS-ADL, kana CDR-sob mamore anopfuura gumi nemaviri.
Nzira inowanzoshandiswa inowanzoshandiswa mazuva ose inokurudzirwa kuti ipe huwandu hwekubatsira pamwe nemigumisiro yakanyanya ndeye 25 mg pazuva. Zvisinei, iwe uchaona kuti chigadzirwa chacho chinotengeswa mune powdhari kana fomu yemvura yakabva ku5 mg kusvika ku 1000 mg kana kupfuura. Uine fomu yakasimba yeupfu, unogona kugovera madhagi ako zvakanyatsojeka uye kuvhuna mukati mechirongwa che25 mg zuva rega rega. Izvi zvichakubatsirawo kuchengetedza mari kune imwe mishonga inouya pomuti wemapiritsi, inodhura, uye haisi kupa nyore kwekuderedza dhesi nyore nyore.
Kutora chirwere chako kamwechete pazuva chakanaka kubvira hafu yeupenyu hweMk 677 Ibutamoren maawa 24. Vanhu vazhinji vanokurudzira kuti iwe utore chirwere chako usati warara nokuti kutanga kokukura hormone tsvina inogona kuita kuti vamwe vanhu vanzwe vakaneta. Izvi zvinowanzowanzova nemigumisiro inowanikwa yepamusoro-yakakura kukura hormone ndicho chikonzero nei zvichikurudzirwa kuti utore chirwere chako nguva isati yarara kuitira kuti urege kunzwa uchinetseka paunomuka.
Izvo zvakakwana kwauri iwe nguva yakareba sei uchida kuronga nguva yako yekufamba kwenguva. Vamwe vanhu vakataura paIndaneti kuti vakatora kuwedzera kwegore kana kupfuura uye havaratidzi zviratidzo zvemigumisiro. Somugumisiro, hapana chikonzero chekugadziridzwa kwakachengetedzwa kwenguva refu uye iwe unogona kumhanya Mk 677 Ibutamoren nokuti chero bedzi iwe uchida usina kushushikana nezvezvisikwa zveGH zvakabuda kana kuti zvinoshandiswa pakutsvaga kwepituitary gland yako. Kune avo vakangwarira, unogona kuchengetedza hurefu hwehurefu kusvika kumasvondo e12 asi inogona kunyatsoshandiswa kwenguva refu kwenguva. Vanhu vazhinji havasati vauya nokuti vanoda zvigadzirwa zvakawanda.
7.Ziko rakakurudzirwa kuti Bodybuilders?
Bodybuilders nguva dzose vanotarisa zvinotevera zvinoshandiswa zvinogona kuvabatsira kuwana hutundu hwakawanda nekuvandudza kushanda kwavo. Kune zviuru zvezvigadzirwa kunze uko izvo zvose zvinoti zvinopa rumwe rudzi rwekubatsira. Zvisinei, zvinogona kuitika pamigumisiro yezvizhinji zvezvigadzirwa izvi ndizvo izvo vanhu vakawanda vanoda kudzivisa. Matambudziko anowanzoenderana nezvimwe zvinetso zvine chokuita nehutano nemishonga iyi zvinosanganisira:
- Kuwedzerwa kuwedzera kuwedzera
- Bhanza remuenzaniso
- Vamwe vakawanda
Apa ndipo apo Mk 677 Ibutamoren inotamba nokuti inodzidza nesayenzi uye mabhidhi anoedzwa kakawanda. Mushure mokunge zvidzidzo zvakawanda uye kuongororwa, zvigumisiro zvakaratidza kuti Mk 677 inopupurirwa kuva imwe yezvinhu zvakanakisisa zvinowedzera kunze kwekuvaka muviri; pamwe chete nedzimwe basa rinosanganisira kudzidziswa simba.
Mk 677 Ibutamoren inobatsirawo pakuvaka muviri nokuti haingakanganisi yako Testosterone mazinga mumhando ipi zvayo pane zvose nenzira isina kunaka. Mushure mokutora kuwedzera uku, hapana chikonzero chekuzadzisa PCT chirongwa kana kutora aromatase inhibitor iyo inotarisirwa kune dzimwe mishonga.
Uyezve, iwe paunotora dosi yemumuromo, iwe unobva wakurumidza kuwedzera kuburitswa kwekukura kwehomoni uye IGF-1 iyo inoburitswa kubva pituitary gland kuburikidza neiyo yakasimba GH pulsations kwemaawa anotevera makumi maviri nemana. Iyi pulses yakasimba inokonzeresa kuti muviri wako ugadzire kukura kwehormone inoburitsa peptide ayo anosunungurwa zvakasikwa pachinzvimbo chekurapa vazhinji vavaki vemuviri vanoshandisa kutora jekiseni rakawanda rekukura kwehomoni-kuburitsa peptidi. Na Mk 24 Ibutamoren, inotorwa nemuromo uye ese mahormone ekukura emahora maawa makumi maviri nemana anotevera anoburitswa kubva kune imwe chete dosi.
Nehupamhi hwepamusoro hwehupenyu hwehupenyu huripo, hahudi chero majekiseni uye kamwe chete inoda inoda kukohwa zvose zvinobatsira. Pamberi pacho, varimi vemuviri vaishandiswa kutora injini dzeHGH uye injini yeGH peptide yaizodiwa kutora doses yakaitika kakawanda pazuva. Iwe unogona kufungidzira kuti haunzwisisiki izvi zviri kuwedzera kune kusakanganisika paunofanirwa kufamba kubva HGH uye peptide inoda firiji yekuchengetedza kunyange uchifamba.
Mushure mekupedza, inokurudzira chirwere chepituitary chinokonzera 12 zvakanyanya GH pulsations. Kuti uwane ruzivo rwakadaro kubva kune peptidi, iwe unofanirwa kuisa GHRP-6 nguva dzinenge 12 kana kupfuura kwezuva kuti uwane zvakafanana. Mukuwedzera, izvi zvinowedzera zviri kuchengetwa mukati mekushisa kwekamuri zvinoita kuti zvive nyore kufamba.
Nezuva rega rega rinoteedzana rekushandisa, mahormone ekuchengetedza mahwindo anoenderera mberi achikwira kusvika kumatanho ari kuwedzera. Sezvo izvi zvichiitika, aya mazinga epamusoro anotendera muviri wako kuona kuti mangani mhasuru iwe yauchakwanisa kurongedza pairi. Uye zvakare, kuwedzera huremu kunokurumidza uye kunoonekwa zvakanyanya munzira yakanaka uye mafuta emuviri anonyungudika nyore kupfuura pakutanga. Hazvina kujairika kune mumwe munhu ari kuzvitora kuti awane kusvika pa10 mapaundi mukati mevhiki yavo yekutanga yekushandisa iyo yekuwedzera.
Sezvo mutambi, unhu hwekurara hunokosha zvakadai sekugadzirisa kwaunoita basa rako kugadzirisa nekudzosa. Ive yakaratidza kuti inopa hutano hwakanaka hwehutano hwakadzika uye hunoshamisa hunovandudzwa nekuda kwekuwedzera kukura kwehomoni yakabuda. Hakusi chete unonzwa uchisimba zvikuru panguva dzekushanda, asi iwe uchaonawo kuwedzera kukuru mukutora nitrogen. Somugumisiro, iwe uchaona kukura kwemasimba sekusati kwamboitika uye kutsungirira kwako kuchawedzerwawo zvikuru. Ichavawo nekuvandudza muhutano hwako kunosanganisira hutano hwakanaka nemvere.
8. (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder Details:
Simba: Mvura, DMSO, Ethanol, Propylene Glycol
Kunyorera Nzvimbo: 170 - 172 ° C
Kuchengetedza: pa 20 ° C 2 years, kuderedza kufungidzirwa kwemhepo, kuvhara munzvimbo yakaoma yakaoma
Hafu yeupenyu: maawa 24
Kuonekwa: Kuvhenekera kwechichena kuisa poda yakanaka, hygroscopic, acrid odor, acrid metallic taste
9.Kutora Liquid (MK-677 Powder) Ibutamoren Powder ye?
Kugadzira mhinduro yemvura kubva muhupfu hwakatsvuka nekuti ndiyo nzira yakanyanya kuyera chaiwo madosi.
Kuita 25mg / ml 30ml mvura yamugadziro yaunoda:
Zunganisa zvose pamwe chete uye zvipise zvishoma kusvikira zvichinyatsopera mugadzirisa.
Ichazonaka sekupenga asi zviri nyore kuishandisa.
Kutenga beaker yegirazi yekusanganisa uye kupisa uye bhodhoro re 30ml. Kuita izvi nehuwandu hweSARM yose asi fungisisa kuti MG unoda zvakadini maererano nemupi wemu mg / ml waunoda.
10.Genius Tenga MK-677 Powder: tenga Ibutamoren Powder kubva AASraw
1.Kutaurirana nesu ne email yedu inobvunzurudza, kana mupepeti wemu Skypecustomer service (CSR).
Zvimwe tsanangudzo pamusoro pezvinhu zvakakosha zvemiti,gamuchirai kuti munyore pano
Tags: Tenga MK-677 Powder, Ibutamoren Powder, MK-677 Powder
Matsiro ekushandisa MK-677 (Ibutamoren) powder yekuvaka muviri
GW 501516 / Cardarine Basic information	Kurema kwekureruka nekukurumidza: Ndeupi rudzi rwekureruka kwehupfumi hunokodzera iwe?